Inaliti Ukubumbela - Chapman Technology Co., Ltd.
Inxalenye ephumeleleyo iqala ngokubumba okwenziwe kakuhle. Le nkqubo inzima kwaye ichanekile ichaza icandelo lokuveliswa kwemveliso kunye neendleko zobomi kwaye ithathela ingqalelo izinto eziphambili kuyilo lokungunda ngelixa ibambelela kwinkcazo ekhethekileyo yenxalenye.
Ukuthathwa njengenye yeendlela zethu ezintlanu zokuphumelela, uyilo olufanelekileyo lokungunda kunye nokwakha ukungunda kuya kunceda ukunciphisa iindleko, kwandise umgangatho kunye nokwandisa ukusebenza. UMenzi weChapmaninkampani inokuxhasa izicelo ezahlukeneyo zoyilo lwesoftware, kubandakanya i-UG, i-ProE, i-CAD, i-SOLIDWORKS njalo njalo. Ewe sinokukubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuyila: i-DME, i-HASCO, i-MEUSBURGER, i-LKM, kunye nohlalutyo lwe-moldflow lokuvavanya konke ukuyila komngundo kunye nezahlulo ngaphambi kophuhliso.
UMenzi weChapman amaziko yokubumba zinika bhetyebhetye ekuqhubeni zonke iintlobo izinto thermoplastic. Sigxininisa kwimveliso yokuvelisa kuluhlu olubanzi lwezicelo kunye nakumashishini athile kubandakanya i-Automobile, ezonyango, izixhobo ze-elektroniki, izihlanganisi, ezemizi-mveliso, ezokhuselo, ezothutho kunye nomthengi.
UMenzi weChapman Inkampani inomatshini wenaliti ukusuka kwi-90 ukuya kwi-600 yeetoni, sinokukunceda ekuphuculeni nasekuyileni imveliso yoyilo lwakho ukufezekisa iziphumo ezilungileyo zokuhlangabezana neemfuno zecandelo lakho.
Ubungakanani beZakhono zokuBumba
1.Large ezinzima Ukubumbela
2.Small ngqo Ukubumbela
3. Faka ukubumba kwaye ngaphaya yokubumba
4.LSR & ngerabha yokubumba
Iqela lethu e UMenzi weChapmansisebenza ngokusondeleyo namaqabane ethu eshishini ukubonelela ngeenkonzo zexabiso elongezekileyo kumashishini akhokela izinto ezinobunzima. Apha ngezantsi zimbalwa zezi nkonzo zinexabiso longezwa:
• Iindibano zamacandelo amaninzi
• Ukulungiswa koMngundo kunye nokuGcinwa
• Inkqubo yokuDluliswa komngundo kunye neenkqubo
• Ukudibanisa i-Ultrasonic
• I-Kanban, iiNkqubo zokuThengisa, njl.
• Ncedisa ekubuyiseleni iinzame
• Icandelo lokuhombisa
• Imibala yesiqhelo kunye noMbala oTshintsha ngokukhawuleza